ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၅ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / UK / ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၅
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၅
(မိိုးမခ)ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၂၀
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတော့ မန္တလေး-ကျောက်ဆည် မှာနေခဲ့တဲ့ ငယ် ဘဝ တုန်းက ရအောင်လိုက် ဖမ်းပြီး ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အညာ ပဒတ်လေးတွေကို ပြန်သတိရလာမိတယ်။ ခုရက်ထဲ ကိုယ့်ဖြစ်နေတဲ့ ပုံ နဲ့ ကိုယ့် ကျင့်နေတဲ့ အကျင့်တွေက တွင်းအောင်း ပဒတ်တကောင် နဲ့ တော်တော်တူနေတာပါလား ။ အောင်းနေတဲ့ တွင်းက မတတ်သာလို့ ထွက်လာရတဲ့ အခါ မယုံသင်္ကာစိတ်တွေ များလှတယ် ။ ဘာကိုမှ စိတ်မချနိုင်ဘူး ။ အစာရှာဘို့ မထွက် မဖြစ်ထွက်ရတယ် ။ ထွက်ရတိုင်း အပြင်ရောက်ရင် မျက်လုံးကလယ်ကလယ်ဆိုသလို ။ ကျီးကြည့် ကြောင်ကြည့် -ကျီးပဲလာ သုတ် မှာလိုလို- ကြောင်ပဲလာ ခုတ်မှာလိုလို။ ခွေးဆွဲခံရမှာ လား။ ကြိုးကွင်း စွတ်မှာ ပါသွားမှာလား ။မလုံ မခြုံဖြစ်နေတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ကိုယ့်မှာ ။
ဧပြီလဆန်းတော့ - ဆေးခန်း ရက်ချိန်း ပြည့်ပေမယ့် ဒီတခါ မသွားခဲ့ဘူး၊ မသွားရဲဘူးဖြစ်နေတာ ။ ဆေးက တလစာ တခါသွား ထုတ်ရတယ်။ သောက်ရတယ်။ မတ်လ ကုန်သွားတော့ ထပ်ထုတ်ဘို့ ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်လက်မှတ်သွားယူရမှာ ။ ပြီးရင်ဆေးဆိုင်မှာ ဆေး သွားထုတ်ဘို့ ။ ဒါပေမယ့် မသွားတော့ ဘူး။ မသောက်တော့ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဆေးခန်းသွားရမယ့် ၅ မိနစ်ကိစ္စကို - ဘာလို့ ခုမှ ဝန်လေးနေတာလဲ ။ အိမ်နဲ့လဲနီးနီးလေး ။ ရွှတ်ကနဲသွားလိုက်ရုံ။ ဒါပေမယ့် ဆေးခန်းမှာ ကိုဗစ် ရောက်နေပြီ။ ကိုဗစ်လူနာတွေ ရှိနေတယ်ထင်တယ် ။ ကိုဗစ်ရောက်ခဲ့ရင် ၃ရက် အသက်ရှင်နေနိုင်တယ်ပြောတယ် ။ ဆေးလက်မှတ်ရလို့ ဆေးဆိုင်သွားရင်လဲ တန်းစီနေရမှာ ။ အဲဒီမှာ တံခါးလက်ကိုင်တွေ ကိုင်ရဦးမှာ ။ဆေးလာထုတ်တဲ့ လူတွေ အများကြီးထဲ- ကိုဗစ်လူနာက အင်္ကျီအနီ ဝတ်လာမှာမှ မဟုတ်တာ ။ ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ။ ဆေးဆိုင်ထဲဝင်ရင်ကော အသက် က ရှူမိမှာ ။ အသက်ရှူမိတာနဲ့ ကိုဗစ်ကအလွယ်လေး ဝင်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား ။ ရောက်နေတဲ့ လူတွေထဲ- နှာစေးချောင်းဆိုး လည်ချောင်းနာ ဘယ်သူက ကိုဗစ်ပါမလဲ ။ ကိုဗစ်က သတ်မှတ်ဝတ်စုံ လဲမရှိ။ မျက်စိ-နှာခေါင်း ကတဆင့်လဲ သူ့ဖါသာ ဝင်လို့ ရသတဲ့ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက အသက် ၆၅ ပြည့်တော့- ဆေးလာစစ်ပါ ။ ခင်ဗျားမှာ ဆီးချိုတွေ သွေးတိုးတွေ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဌါနက စာရောက်တဲ့ အချိန်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ကြီး ဆေးခန်းသွားခဲ့တာ။ သွေးတွေ ဆီးတွေ- သွေးပေါင်ချိန်တွေ- သွားစစ်တာ အလကားဆိုတော့ စိတ်ပါလက်ပါ သွားခဲ့တာပဲ ။ ဆေးခန်းက ခင်ဗျားမှာ ဆီးချိုသွေးချိုတော့ မရှိသေးဘူး။ သွေးထဲမှာ အဆီနဲနဲ လေး များနေတယ်။ အဆီကျဆေးစားရမယ် ဆိုတာနဲ့ သွေးအဆီကျဆေး ပုံမှန်စားလာခဲ့ တာ။ အခု ဆေးသွားထုတ်ဘို့ သတ္တိ တွေက ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် ။ သွေးအဆီ မကျလို့ ချက်ချင်းကြီး ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ တွေးတတ်သွားတာ ။ မနေ့ကတင်ကြတဲ့ ဆုံးပါးတဲ့ လူ တွေထဲမှာ မြန်မာ ၃ယောက်ပါတယ် ။ သူတို့ အမျိုး အဆွေတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီက- တွဲရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ အမှတ်တရ တင်ပေးကြတဲ့ အခါ ဆုံးပါးသွား တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး ဆိုတာ ကိုယ့်ထက်အများကြီး နုပျိုသေးတယ် ။ နောက်တယောက်ဆို အသက် ၃၀ကျော်ရုံလောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တာပဲ ။တောင့်တောင့်တင်းတင်း-ချပ်ချပ်ယပ်ယပ် လူရွယ် တယောက် ။ ကိုဗစ် ဟာ အထာမရှိ ။ Ethic မရှိဘူးကွာ ။
စျေးဝယ်ရာ က ပြန်ရောက်တာနဲ့ အိမ်ထဲတန်းမဝင်နိုင် ဘူး။ အိမ်ဘေးကနေ အိမ်နောက်ခြံထဲ အရင်ဝင် ။ ခြံထဲက တဲလေး( Shed )ထဲ မှာ ဝယ်လာတဲ့ စားစရာတွေအရင်ချ ။ လက်အိတ်ချွတ် ။ မျက်နှာစည်းကို ချွတ်။ အိမ်နံရံဘေး က ရေဘုံဘိုင်မှာ လက်ကို အရင် ဆေး ။နောက် လက်ကို ပိုးသတ်ဆေး အရက်ပျံကျကျနန လူးပြီး မှ စားစရာတွေကို တခုချင်း တတ်နိုင်သလောက် ပိုးအရင် သတ်တယ်။ ရေဆေးတန်တာဆေး။ အိတ် အကာတွေ အိတ်အခွံတွေ ဖယ်ပစ်လိုက်တယ် ။ထားလို့ရတာမျိုး တဲထဲမှာ ၃ရက်ပြည့်အောင် ပစ်ထားလိုက်တယ် ။ ပြီးမှ မီးဖိုခန်းထဲ သွင်း။ ဒီလို ကိုဗစ် နဲ့ သေခန်းဖြတ် အလေ့အကျင့် လုပ်ထားတာ ။
သတင်းတွေလိုက် ဖတ်နေတော့ ဆေးရုံရောက်နေတဲ့ နှာခေါင်းပိုက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က သူ ဟာ အိမ်ထဲက ဘယ်မှ ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ စာတိုက်က လာတဲ့ စာတွေကိုဖေါက်မိတာ တခုဆီကပဲရဘို့ ရှိမယ်ဆိုတယ်။ ။နောက်တယောက်ကလဲ အတိအကျ အိမ်တွင်းအောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတယောက်။ ကိုဗစ်နဲ့ ဆုံးသွားရှာတယ်။ သူ့မှာ ကူးစက်စရာကိစ္စဆိုလို့ ဆိုင်တွေက သူ့ယောကျ်ား ဝယ်လာပေးတဲ့ မီးဖိုချောင် စားစရာတွေဆီကပဲ အဆက်အစပ်ရှိမယ်တဲ့ ။( Rachel Brummert , Charlotte, North Carolina) အဲဒီသတင်းမျိုးတွေဖတ်မိရင် သွေးလေပျက်။ စီးတဲ့ ဖိနပ်က လဲ သယ်လာနိုင်သေး ဆိုပဲ ။ The Coronavirus Can Spread Through the Soles of Shoes, According to the CDC
ပိုးရှိမရှိစစ်ဘို့ နှာခေါင်းထဲ က နေ ထုတ်ယူတဲ့ နမူနာ( Nasal Swab ) ကို ဓါတ်ခွဲတာမျိုးက မသေချာဘူး ။ ပိုးရှိပေမယ့် နက်ကတစ် ပြနေတတ်တယ်။ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အမှားရှိတယ်လို့ ခုမနက် ဆေးသိပွံ ဆရာတယောက်က ပြောသွားပြန်ရော ။ အမြန်စစ်တဲ့ နည်း Rapid test Kit တွေကလဲ အမြဲ မမှန်ဘူး။ ရောဂါ ရှိနေပေမယ့် အမြဲ ပေါ့စတစ် ပြမယ် မပြောနိုင် ဘူး။ အခုစစ်လို့ ပေါ့စတစ် မပြတာနဲ့ သူ့မှာ ရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့ တထစ်ချ မပြောနိုင်ဘူးဗျ။ နောက်တနေ့ကျမှ စစ်တဲ့အခါ ပေါ့စတစ်ပြတတ်တာလဲ ရှိတယ်၊ သူက ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မသေချာဘူး။ သေချာတာ ပဋိဇီဝဓါတ်ကို စစ်တာ Antibody Test ။သူ့ကို စစ်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒီလူမှာ ပိုးကူးစက်ထားပြီးပြီ။ သူက ခံနိုင်ရည်ရှိထားပြီ။ ပြောလို့ ရတယ်တဲ့။ ရောဂါ ရှိနေသူတွေရဲ့ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းဟာလဲ ကိုဗစ်လက္ခဏာ- ဘာတခုမှ မပြပဲ နေနိုင်ကြပါသ တဲ့ ( 37% is asymptomatic )
လူတယောက်ကို မသင်္ကာလို့ စောင့်ကြည့်မယ်ဆို ၁၄ ရက် ဆိုတာ အရင်လ တုန်းက သိတာ ။အခုနောက်တော့ ၂၁ရက်မှ ဖြစ်မယ်လို့ သိတယ် ။ ၁၄ရက်ကျော်သွားတော့မှ ပေါ့စတစ် လူနာတွေလဲတွေ့လာရလို့ ဆိုတယ်။တရုတ်ပြည်မှာတော့ ရုရှားဘက်က ပြန်လာတဲ့ လူတိုင်းကို ၂၈ ရက်စောင့်ကြည့် ကာလဆိုပြီး ထားလိုက်ကြပြီ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလဲ ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်တာ မလုံလောက်ဘူး လို့ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးခန်းမှာ ထည့်ဆွေးနွေးသွားတာ နားထောင်ရတယ်။
ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် နိုင်ငံတွေတုန့်ပြန်ပုံက အမျိုးမျိုး ပါ ။ အစိုးရတွေ အရေးယူဆောင်ရွက်တာ အမျိုးမျိုးပါ ။ ဆေးပညာရှင်တွေ တွေ့ရှိနေတာလဲ အမျိုးမျိုးပါ ။ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ-တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ကြပုံ တွေ -တနေ့တနေ့ နားလည်အောင် အတော်ကြိုးစားရတုန်းပါ ။
ရောဂါ မကူးစက် အောင် အသေနဲအောင် အငတ်ခံကြမယ် စီးပွါးအပျက်ခံကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအမံနဲ့ နိုင်ငံတွေက အများစု ။ ရောဂါဖြစ်တာကို နဲ နဲ ခံလိုက် မယ်။ အသေအပျောက်ရှိတာ နဲနဲ ခံလိုက်ကြမယ်။တိုင်းပြည်စီးပွါးတော့ အပျက်မခံဘူး ။ တတ်နိုင်သလောက်မရပ်ထား ချင်ဘူး။ လူတွေ ကို အရမ်းကြီး အငတ်မခံခိုင်းဘူးဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေလဲ ရှိနေသေးတယ်။ ဥပမာ ဆွီဒင် လို ဂျပန်ပေါ့ ။ မြို့တွေကို လော့ဒေါင်းမချဘူး ။လူတွေကို တွင်းမအောင်းခိုင်းဘူး။ အိမ်မှာ ပဲနေကြပါ မပြောဘူး။ ။သွားခွင့်လာခွင့် ပေးထားတယ်။သတိနဲ့ သွားကြလာကြဖို့ လောက်ပဲ ပြောတယ်။ အသက်ရှူချောင်အောင်လုပ်ထားတယ်။ ဆွီဒင်ဆိုရင် နော်ဝေ ထက်သေနှုန်း အတော် များတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်တွေ မပိတ်။ သတိနဲ့ သွားလာနေကြရုံ ။
ထိတ်လန့်စရာ - ယူကေက လူအိုရုံ ၂၀၀၀ ကျော် မှာ ကိုဗစ် ပျံ့နှံ့ကူးစက်ခံနေရပြီလို့ ဒီနေ့ သတင်းတက်လာတဲ့ ကိစ္စ ။County Durham ကောင်တီဒူရမ် အရပ်က စတန်လီ လူအိုရုံ ( Stanley Care Home) မှာ ၁၃ ဦးဖိတ်စင်တဲ့သတင်း ။ တနေ့က H.A care home က တာဝန်ရှိတဲ့ လူတယောက် အင်တာဗျူးတော့ သူတို့ လည်ပတ်နေရ တဲ့ လူအိုရုံ ပေါင်း ၉၀ လောက်မှာလဲ အခု လူ ၁၅၀ လောက်ဖိတ်စင်သွားခဲ့ပြီဆိုတယ် ။ သိုးတွေ သေသလို-သေတယ် ။ လူအိုရုံမှာ အမှုထမ်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ခုထိ PPEဆိုတာ မထောက်ပန့်နိုင်သေးဘူးတဲ့။
စပိန်အီတလီ မှာတော့ ဖြေလျော့တာတချို့ စလုပ်လာကြတယ်။ ဥပမာ-ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ပတ်ခွင့် လုပ်ခွင့်ပေးတာမျိုး။ သတိနဲ့ သွားကြလာကြဖို့တော့ သတိပေးတယ် ။ အရက်ဆိုင် ကော်ဖီဆိုင် စားသောက်ဆိုင်တွေတော့ ပိတ်ထားဦး မယ်ဆိုတယ်။ ကာကွယ်ဆေးမရမချင်း ပိတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး တချို့က မှန်းဆတယ် ။
ကိုဗစ်ဖြစ်လာမှ စီးပွါးဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမျိုးက လဲ ရှားရှားပါးပါး ရှိဦး မယ်ထင်တယ်။ဥပမာ လက်ကိုင် ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေ ။ရုပ်သံလွှင့် တယ်လီးဗေးရှင်းသတင်း ဌါနမျိုးတွေ ။
အမေရိကန်မှာတော့ဒီနေ့ သမတကြီး ထရမ့်နဲ့ မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ သတင်းသမားတွေ စကားများနေကြပြီ ။ ထရမ့်က စီးပွါးရေးပြန်ဖွင့်ချင်တဲ့ သဘောတွေ့ရတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ သန်းပေါင်းများစွာ ကို အလကားကြာကြာ ကျွေးရမှာမလွယ်ဘူး လို့ သူတွက်ပုံရတယ် ။ အကန့်အသတ်မရှိကျွေးရမယ် ဆို တိုင်းပြည် အတော်မွဲတော့မှာ သေချာနေတော့ နဲနဲ ပို အသေခံပြီး စီးပွါးရေးတွေ ပြန်လည်ပတ်ချင်တဲ့သဘော။ ကိုဗစ် အကြိုက်ပေါ့။ ကိုဗစ် ကွင်းမှာ ဝင်ကစားကြရမှာ ပေါ့။
ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က နလံထလာပေမယ့် အလုပ်ဝင်နိုင်အောင် အားရှိပုံမရဘူး. အသည်းအသန် အထူးကြပ်မတ်ခန်းက ထွက်လာတဲ့နေ့က ဆေးရုံက ဆရာဝန်ဆရာမတွေကို ပြောတဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားထဲမှာ သူ့အသက်ရှင်လာတာ ဆရာဆရာမတွေကြောင့် ဆိုတာမေးစရာတောင် မလိုဘူးတဲ့ ။ သူရှင်မလား -သေမလား ၄၈ နာရီ လောက်ကြာအောင် ဟိုဖက် -ဒီဖက် ဖြစ်ခဲ့ရတာတဲ့ .
မြန်မာက ၆၃ ယောက် တွေ့နေပြီဆိုတော့ သိတ်မကြာခင် တပတ်လောက်အတွင်း ၆၃၀ ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ် ။တချို့က စစ်ဆေးတဲ့စင်တာတွေ Testing facilities များများ ဖွင့်ဘို့လိုနေပြီ .။ စိတ်ချရတဲ့ Rapid Antibody testတွေ နဲ့ များများစစ်ပေးဘို့လိုပြီလို့ ပြောလာကြပြီ ။ စစ်နိုင်ရင် ဖွင့်နိုင်ရင် ကောင်းတာတော့ကောင်းတာချည်းပါပဲ ။ ပညာရှင်အား ငွေအား လိုက်နိုင်မှဖြစ်တာတွေ အားလုံး ။
အများကြီး တွေ့လာပြီဆိုတော့ လူတွေလဲ အလေးအနက်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ မတ်လတလလုံး အသံမပြုသူတွေ အသံပြုလာကြပြီ။ တာမွေမှာ ပြန်လျှော် ဖွတ်ပြီး သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မျက်နှာဖုံးကာဗာ အစွပ်တွေ ပရဟိတ အသင်းတသင်းက စျေးထဲမှာ လိုက်ဝေနေတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကြည့်ရတာ သာဓုပါ ။ Fever Clinic တွေ ပေါ်လာတာ မြန်မာတွေရဲ့ အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လူမှုစိတ်ဓါတ်နဲ့ မေတ္တာတရားတွေကြောင့် ပဲ
အသံမျိုးစုံကို လိုက်နားထောင်ကြည့်တဲ့ အခါ.......... . .
ပြည်တွင်းပြန်ကို စောင့်ကြည့်ဘို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ခေတ်က ကျန်သွားပြီ နော်။ ရပ်ကွက်ချင်းတောင် မကူးကြနဲ့တော့... သက်သာမှာပါ ......
သမ္မတ ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ၊ ဝန်ကြီး စတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေ ရဲ့ ကျန်းမာရေး. ကိစ္စတွေက သတင်းထိန်ချန်လို မရသလို လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ အနုပညာရှင် .တွေ ရဲ့ ကိစ္စ ကလည်းသတင်း ထိန်ချန်လို မရပါဘူး........
ရန်ကုန်က ဗဟိုချက်ဖြစ်လာပြီ ( Epicentre )........
တစ်မြို့ ချင်းစီက ကိုယ့်မြို့ကို တာဝန်ယူပိတ်ထားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်..........
ရန်ကုန် အစိုးရ ရွေးစရာ ၂ခု။ လော့ဒေါင်းလား။ အကူးခံ အငတ်မခံလား..................
အဆိုတော် မျိုးကြီး တွင် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ ရှိ.........
ပြင်သစ် ဧည့်လမ်းညွှန် ကေ့စ် ၈ ကွယ်လွန်.........
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သဒ္ဓါက အဓိကမကျဘူး
ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လမ်းညွှန်မြေပုံချတဲ့အခါမှာ
သမ္မာဒိဌိဆိုတဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် သိမြင်မှုကိုရှေ့ဆုံးထားဟောခဲ့တယ်။ ( ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကံနှင့်ဘဝ အလုပ်နှင့်လုပ်အားခ )............
အခုကူးစက် နေတဲ့Covid19 ဗိုင်းရပ်ပိုး ကတရုတ်ကလာတဲ့ပိုး၊ကွန်မြူနစ်ပိုး၊ဘယ်ဘုရားကိုမှ
ယူအန်မှာ လကုန်ရင် ပိုက်ဆံ ပြတ်ပြီ ဟု အတွင်းရေးမှူး သတိပေး
( UN to run out of money by end of month, secretary general warns)
တစ်ဦးချင်း စိတ်ဒဏ်ရာ၊ မိသားစုအလိုက် စိတ်ခံစားမှု၊ လူမျိုးအလိုက် နာကျင်တာ၊ နိုင်ငံအလိုက် ဝေဒနာ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် နာကျင်တာတွေ ရှိနေကြဆဲပါ။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ အမျိုးမျိုးကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ခေတ်အလိုက် ဆေးတွေရှာဖွေတွေ့ရှိလို့ ကပ်ကြီးများ အကြိမ်ကြိမ် ကျော်လွှားခဲ့ပြီ။ small pox, Spanish influenza နဲ့ ငှက်ဖျားတို့လိုပေါ့။ လက်ရှိ ကိုဗစ် ၁၉ ကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့ vaccine - ကာကွယ်ဆေး မကြာခင် လပိုင်းအတွင်းမှာ ရှာတွေ့မှာပါပဲ။ ပရိုတိန်း အယောင်ဆောင်တဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့သဘောကို လွန်ခဲ့သုံးလကထက် အခုချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ တစ်ဝန်းလုံးက သိပ္ပံပညာရှင်များ ပိုနားလည်လာပါပြီ။ ထို့နည်းတူ စိတ်ခံစားမှု အပိုင်း - emotional aspect မှာလဲ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ရော စုပေါင်း၍ကုသခြင်းပါ ရှိရပါမယ်။
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာနတို့ဟာ ကမ္ဘာကို ကူးစက်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါကြီးပါ။ သတိ - mindfulness အခြေခံတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား (empathy)၊ သနားကြင်နာမှု (compassion) ဆိုတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ နှစ်ဟောင်းက စိတ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို ကုသကြရမှာပါ။ အပြစ်မြင်ခြင်း၊ အပြစ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ အဆိုးမြင်ခြင်းက အဓိက ရောဂါလက္ခဏာ (symptoms) ပါ။ အနာသိရင် ဆေးရှိပါတယ်။
သင်္ကြန်ကာလမှာ ဘုရားကျောင်းကန်သွားကြတဲ့ လိုရင်းရည်ရွယ်ချက်က နှစ်ဟောင်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ နုတ်ဆက်နိုင်ရေးပါ။ အခုတစ်ကမ္ဘာလုံး လုပ်နေကြရတဲ့ global lock down ကြောင့် ဘုရားကျောင်းကန်ကို လူကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်လည်း အိမ်မှာနေရင်း နှစ်ဟောင်းကိုနုတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ရေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ရွှံ့ကို ရေနဲ့ပဲ ပြန်ဆေးကြောရသလို စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်အညစ်အကြေးများကို စိတ်နဲ့ပဲ ပြန်ဆေးရပါတယ်.......(အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော် .ပါမောက္ခဒေါက်တာ အရှင်ဓမ္မသာမိ )
မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ဦးရဲမြင့်ရဲ့ ဆုံးပါးသွားရှာ ပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ အကိုအတွက် ဒီနေ့ တင်ထားတဲ့ အမှတ်တရ စကားလေးက
• My brother wasavery kind, compassionate doctor . He has helped many relatives, friends, doctors and many patients . He was very brave to see his 4-5 COVID patients without proper PPE ( no face masks in his ward). And he got Corona virus from the patients.
ခွန်ဆိုင်း ( ၁၄-၀၄ -၂၀၂၀)
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၅ Reviewed by MoeMaKa on 10:00 AM Rating: 5